I-One Stop Shopping Factory - Abakhiqizi baseChina One Stop Shopping, abahlinzeki
Umshini wokugoqa we-Shisha packing carton box Machine
umshini wokupakisha onemisebenzi eminingi, lapha khombisa ubuchwepheshe be-SHISHA, kusuka kuketshezi kuya kokuqinile noma unamathisele isikhwama sokugcwalisa nokufaka uphawu, inqubo iqala ngokugoqwa kwefilimu eyindilinga, umshini wokumisa mpo uzodlulisa ifilimu kusuka ku-roll bese ufaka ikhola yokwakha (kwesinye isikhathi kuthiwa yishubhu noma igeja). Uma idluliselwe kukhola ifilimu izobe isigoqeka lapho phezu kwamabha wokumisa mpo azokwelula futhi avale ngemuva kwesikhwama. Lapho ubude besikhwama obufunwayo budluliswa ...
Ukugaya umshini wokupakisha wokuxuba we-powder
Indawo yokugaya okusanhlamvu ingumsebenzi oqhubekayo wokudla, ngesakhiwo sikanokusho nesinomusa, umsindo ophansi, ukugaya okuhle, akukho uthuli, nokusebenza okulula nokulula. Kukulungele ukucutshungulwa kwezinhlamvu ezahlukahlukene nezinto zokwelapha zaseChina ezitolo ezinkulu, enxanxatheleni yezitolo nasezitolo zezitolo.
Isihlanganisi: Isixubi silungele ukuxuba impuphu noma izinto eziyimbudumbudu ezimbonini zamakhemikhali, zokudla, ezemithi, okuphakelayo, i-ceramic, i-metallurgical nezinye izimboni.
Ukugcwalisa umshini wokubhala we-capping
Ulayini wokukhiqiza uwoyela womnqumo usha kakhulu emgqeni womhlangano. Kuyimodeli yokuthuthukisa ngokususelwa kulayini wokukhiqiza wokugcwalisa uketshezi wangempela wenkampani yethu. Ayigcini nje ngokuthuthukisa ukunemba kokugcwaliswa nokubekwa komkhiqizo, kepha futhi ithuthukisa ukusebenza, ukuzinza, nekhwalithi yomkhiqizo. Ukusebenza kwezinto ezahlukahlukene zomkhiqizo nakho kuthuthukiswe ngokuqondakalayo ukwenza umkhiqizo ube nokuncintisana okukhulu emakethe. Kukulungele ukupakishwa kwamafutha omnqumo, u-sesame oyela, u-oyela wamantongomane, uwoyela ohlanganisiwe, isosi yesoya neminye imikhiqizo. Ulayini wokukhiqiza uwoyela womnqumo uqukethe umshini wokugcwalisa othomathikhi onamakhanda ama-4, umshini wokufaka othomathikhi, nomshini wokufaka uphawu ebhodleleni eliyindilinga. Imodeli entsha inokusebenza okuzinzile, izinga lokwehluleka okuphansi kanye nokuqukethwe kobuchwepheshe obuphezulu.